त्यागी राउत - परिहास - नेपाल
अन्ततः चन्द्रकान्त राउत उर्फ सीके राउतले पनि आफ्नो पार्टीको नामबाट ‘मधेस’ लाई झिकिफालेछन् । उनको पार्टीको पहिलेको नाम थियो, ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ । तर सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि त्यसमा ‘स्वतन्त्र’ भन्ने शब्द उपयुक्त नभएको तर्क आउन थाल्यो । किनभने, नेपालमा आजसम्म सरकार त स्वतन्त्र बन्न सकेको छैन भने पार्टी कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ ? सरकारले राउतलाई ‘स्वतन्त्र’ शब्द झिक्न आग्रह गरेको थियो । राउतले ‘मधेस’ समेत झिकिदिए । अब स्वतन्त्र र मधेस दुवै नभएपछि गठबन्धन के काम ? अतः गठबन्धन पनि झिकियो । र, नयाँ न्वारान गरियो ‘जनमत पार्टी’ ।
सीके राउतलाई अहिले स्वतन्त्रता पनि चाहिएको छैन, मधेस पनि चाहिएको छैन । चाहिएको छ त केवल एक थोक, त्यो हो जनमत । पहिले त उनी जनमत मात्रै भन्दैन थिए । जनमतसंग्रह भन्ने गर्थे । अहिले जनमतपछिको ‘संग्रह’ पनि त्याग गरेका छन् । केवल जनमत मात्र । जनमत भएपछि अरु केही पनि चाहिएन । तर यो जनमत किन र के काम गर्न चाहिएको हो, त्यो भने आजसम्म कसैलाई थाहा छैन ।
राजनीतिमा त्याग चाहिन्छ भनिन्छ । सायद यतिबेला नेपालकै सबैभन्दा ठूलो त्यागी नेता सीके राउत नै हुन् भन्दा फरक नपर्ला । पार्टीको नाम, सिद्धान्त, अवधारणा, उद्देश्य सम्पूर्ण त्यागेर राजनीतिमा आउने उनीबाहेक अर्को भएजस्तो लाग्दैन ।
प्रकाशित: चैत्र ११, २०७५